Soo dejisan DivX 10.3.1 – Vessoft
Converters Video, Ciyaaryahan Media, Codecs
Soo dejisan DivX
DivX – xirmo software oo uu ku ciyaaro, record iyo badalo video files. Software waxaa ka mid ah ciyaaryahanka kaas oo u saamaxaya in ay qoraan iyo ciyaaro tayo sare video qaabab kala duwan. DivX ka mid ah khariidad codec u aragto video files in MKV ama DivX qaabab in ciyaartoyda kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay u badalaan videos qaabab kala duwan ama soo raadkaygay ku audio ka video files. DivX sidoo kale macaamila daalacashada caan ah oo u saamaxaaya in ay ku ciyaaraan ma geeyo video in tayo sare leh.
Support of qaabab video caan
Set A of codecs
Play ee Streaming video
Kuweeda video files
DivX Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... GoToMyPC 8.3.1611